ဗွီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် ClearView နှင့် RTM စနစ်များအတွက်သစ်ဂရပ်ပုံဆွဲကိရိယာများကိုစတင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ClearView နှင့် RTM စနစ်များအတွက်ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှုမိတ်ဆက်နယူး Log in ဝင်ရန်-graph Tools များ
နယူး Software များ Tools များမြင်ယောင်ရန်လွယ်ကူအောင် Graphical Form ကိုအတွက်စမ်းသပ်မှု-Log in ဝင်ရန်ဒေတာများထားပါ
Campbell, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ မေလ 26, 2015 - ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု Inc ကိုစျေးကွက်-ဦးဆောင်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာခြင်းများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်များပံ့ပိုးပေး, ယနေ့င်း၏ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးဖြာ၏ ClearView လိုင်းနှင့် RTM ကို real-time နှစ်ခုအသစ်က log-graph tools များထုတ်ပြန်ကြေညာ အသံနှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖြေရှင်းနည်းများ။ အဆိုပါ Excel ကို (R) ၏တစ်ဦးကဒီဇိုင်းအသစ်အသုံးပြုသူများကိုရှင်းလင်းစွာမဆိုကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်ယောင်နိုင်အောင်ယခင်က ClearView နှင့် RTM စနစ်များ, ClearView- နှင့် RTM-generated မှတ်တမ်းဖိုင်တွေထဲကသစ်ကို software များကို tools တွေကိုကြံစည်မှုစမ်းသပ်ဒေတာနှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့ tools တွေကို graphing နှင့်နဲ့ပါတ်သက် စမ်းသပ်မှုအောက်တွင်ကွန်ယက်ကိုလမ်းကြောင်း။
"ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုပေးပို့တွင်ပါဝင်ပတ်သက် variable တွေကို, လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်စည်းမျဉ်းများတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူခြေရာခံဖို့တိုင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပုံစံထဲသို့ဒေတာကိုချပြီး, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အမှားအယွင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ nontechnical ပရိသတ်တွေဖို့ဒေတာကိုရှင်းပြနှင့်လိုက်နာမှုသရုပ်ပြအရေးပါသောလမ်းဖြစ်ပါတယ် "ဟု Blake က Homan, ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တည်ထောင်သူကဆိုသည်။ "ဒီ tools တွေကို ClearView နှင့် RTM ကနေအားလုံးဗီဒီယိုနှင့်အသံအရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်ရမှတ် ယူ. ဂရပ်များအပေါ်တိုင်းတာကြံစည်။ အသုံးပြုသူများသည်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလွယ်တကူစွမ်းဆောင်မှုကိုခြေရာခံရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချုံ့ချဲ့အတူတူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်-based အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂရပ်အဖြစ်လည်းကောင်းဒေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အသစ်ရေးကိရိယာများကိုလည်းအမှန်တကယ်ပိုပြီးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်နှင့်သင်တိုင်းဒေတာအစုံမဆိုပေးထားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူစမ်းသပ် data တွေကိုပိုပြီး volumes ကိုပေါင်းသင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက PDF ကို format ကိုအတွက်ဂရပ်များကိုသင် output ကိုကြကုန်အံ့။ "
နှစ်ခု tools တွေ, အ Metric Log in ဝင်ရန် Grapher ၏ပထမဦးဆုံး, ClearView နှင့် RTM စနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စနစ်တစ်ခု-generated မှတ်တမ်းဖိုင်တွဲထဲကနေထိုကဲ့သို့သော DMOS အဖြစ်စမ်းသပ်-မှတ်တမ်းဖိုင်များ, တူဒါဟာစမ်းသပ်မှု-graphing application ကိုအလိုအလျှောက်အုပ်စုများ။ ဒါဟာအလိုအလျောက် folder ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဒေတာကြာစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများဃ folder ထဲမှာရှိပါတယ်မည်မျှကွဲပြားခြားနားပေါ် မူတည်. တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းအပေါ်မက်ထရစ်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အများအပြားဂရပ်များတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် overlay ကိုဂရပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အသုံးပြုသူများကပေးထားသော sequence ကိုအပေါ်ပြုမိသို့မဟုတ်ပာ၏သတ်မှတ်ထားခဲ့ကွောငျးတစျခုစီစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်အောင်ဒီလမ်းအတွက်, တူညီတဲ့ log-file ကိုအမျိုးအစားအုပ်စုများအလိုအလြောကျအတူတကွမွမ်းမံလေ၏နေကြသည်။ မက်ထရစ် Log in ဝင်ရန် Grapher ဂရပ်များနှင့်ပေါင်းစုကော်မာကွဲကွာတန်ဖိုးကိုတစ်ဦးချင်းစီကဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းနှင့်အော်ဒီယိုချန်နယ်နှိုင်းယှဉ် (CSV ဖိုင်) ဖိုင်တွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါဟာအစနိမ့်ဆုံး, အများဆုံးနှင့်ပျမ်းမျှနှိုင်းယှဉ်အကျဉ်းချုပ်ဇယားကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အဆုံး၌, အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အကျဉ်းချုပ်ဂရပ်များ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်ဖိုင်တွေနဲ့နောက်ထပ်ဒေတာကိုအနက်ကိုဘော်ပြဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်သည့် CSV ဖိုင်များ, င်တစ်ဦးဇစ်ဖိုင်တွဲရ။
ဒုတိယ tool ကို, RTM Log in ဝင်ရန် Grapher သာ RTM ထုတ်ကုန်သက်ဆိုင်သည်။ ဤသည်ဆော့ဖ်ဝဲ application system ကို-generated နိမ့်ဆုံးဆံ့ကြောင်းမှတ်တမ်းများ, အများဆုံးနှင့်တစ်ဦး RTM ကို system ရဲ့ Run-အချိန်စမ်းသပ်မှုကနေပျမ်းမျှအားရမှတ်တစ်ဂရပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ နာရီ, ရက်, သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ် - - RTM Log in ဝင်ရန် Grapher နှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦးမည်သည့်ကြာချိန်၏ RTM-generated စမ်းသပ် data ကိုယူနိုင်ပြီးအပြန်အလှန် zoom ကိုနှင့်စာစောင်ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြု. ကြည့်ရှုဖို့ဒေတာအစု၏အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရွေးပါ။ RTM Log in ဝင်ရန် Grapher ဆိုပေးထားစမ်းသပ်ပြေးအတွက်ထုတ်ပေးစေခြင်းငှါအသီးအသီးစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုရွေးချယ်ရေးမြေပုံရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Metric Log in ဝင်ရန် Grapher ယခုအားလုံး ClearView နှင့် RTM စနစ်များနှင့်အတူတင်ပို့နေသည်။ အဆိုပါ RTM Log in ဝင်ရန် Grapher ချက်ချင်းတင်ပို့နေသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးရေးကိရိယာများကိုလည်းလက်ရှိဖောက်သည်တစ်ဦး update ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် videoclarity.com.
ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု Inc ကအကြောင်း
ဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းမှု Inc ကိုအစဉ်မပြတ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုင်းတာရမည်ဟုသုတေသီများက, ထုတ်လွှင့်, ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချသူနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြန့်ဖြူးအင်ဂျင်နီယာများများအတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ စျေးကွက်-ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာအားဖြင့် propelled, ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှုဖြေရှင်းချက်ကဲ့သို့သောအဓိကမီဒီယာကွန်ရက်များအားဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးမွေးစားခဲ့ကြ အား NBC Universal နှင့် BSkyB; ထိုကဲ့သို့သော Cisco သည်အဖြစ်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်-ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် သဟဇာတ; ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာတော်ဝင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ Institute မှအမေရိကန်ကြည်းတပ်နှင့်နာဆာအဖြစ်နှင့်ပညာရေး, အစိုးရနှင့်နှင့်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ။ ဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမ့်ဘဲလ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်ဌာနချုပ်ကိုအတူ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင် videoclarity.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/VideoClarity/VideoClarity-DMOS_LumaGraph.jpg
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ClearView Log-graph RTM စနစ်များ ဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းမှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-29
ယခင်: matrix Solutions ကြီးထွားမဟာဗျူဟာ accelerates
နောက်တစ်ခု: Telemundo 2015 - ကုန်စည်ပြပွဲ, Cine, ဗီဒီယိုနှင့် Riedel ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ရုပ်မြင်သံကြား Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview